झापाका सिडिओले टेलिभिजनकर्मीलाई भिडियो खिच्न रोक लगाएपछि…. - BirtaJyoti
झापाका सिडिओले टेलिभिजनकर्मीलाई भिडियो खिच्न रोक लगाएपछि….
बिर्ताज्योतीFebruary 5, 2019 5:32 am 0
झापा । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले आफ्नो कार्यकक्षभित्र टेलिभिजन पत्रकारलाई भिडियो खिच्न रोक लगाएका छन् । सोमबार नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समाचारका लागि भिडियो खिच्न गएका ‘एपी वान’ टेलिभिजनका क्यामरा पर्सन विष्णु श्रेष्ठ सहितका टेलिभिजनकर्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको भिडियो खिच्न रोकेका हुन् ।
‘त्यो क्यामरा बन्द गर, भनेर तीन पटकसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले क्यामरा बन्द गर्न लगाए,’ एपी वानका क्यामरा पर्सन विष्णु श्रेष्ठ भन्छन् । यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले क्यामरा बन्द गर्न टेलिभिजन पत्रकारलाई ठाडो रुपमा बारम्बार निर्देशन दिएका थिए ।
उनले ‘मोबाइलबाट खिचे खिच्नुस्, टेलिभिजनको क्यामराबाट खिच्न मेरो कक्षमा दिन्न’ भन्दै सञ्चारकर्मीलाई बारम्बार भनिरहे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले यो आफ्नो कक्ष भएकाले यस भित्र आफ्नो पूर्ण अधिकार हुने भन्दै सोमबार टेलिभिजनका क्यामरा बन्द गर्न लगाएको स्वीकार गरे ।
‘मेरो कक्षमा मेरो अधिकार हो, टेलिभिजनले लाईभ गर्छन्, म लाईभ गर्न दिन्न, मोबाइलबाट खिच्न रोक लगाएको होइन, टेलिभिजनको क्यामरा बन्द गर्न मैले नै लगाएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने । यो सरकारकै निर्णय र निर्देशन भएको समेत दाहालको दावी छ । उनले कांग्रेसले बुझाएको ज्ञापनपत्र लिइरहँदा त्यहाँ पुगेका नेता कार्यकर्ताले भने मोबाइलबाटै फेसबुक लाईभ गरिरहेका थिए भने फोटो र भिडियो समेत खिचिरहेका थिए । अन्नपूर्णपोष्टबाट
झापामा चितुवा आतंक
झापा । केही समययता झापामा चितुवाको आतंक सुरु भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार विगतमा झापामा चितुवा आतंक कहिल्यै थिएन । तर, मंसिरमा झापा ... Read More
admin- January 21, 2018
झापा । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–१ निवासी एक व्यक्तिले श्रीमतीको गए राति हत्या गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टका अनुसार २३ ... Read More
सर्पले डस्दा वालिकाको मृत्यु
भद्रपुर । झापाको कचनकवलमा सर्पले डस्दा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्युहुने कचनकवल २ की १४ बर्षीया पूजा भट्टराई रहेको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ... Read More
NEWER POSTढापपोखरीमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
OLDER POSTबिर्तामोडमा एक्टिभ नाइन समूह बनाएर नौमति बजाउँदै युवा
स्वीजरल्याण्डका डाक्टरको नजरमा यस्तो छ बी एण्ड सी हस्पिटल
मोरङका महिला अधिकारकर्मीलाइ चुनौति